'Ngiyoganwa emaXhoseni ayikho lento yamaZulu' | News24
'Ngiyoganwa emaXhoseni ayikho lento yamaZulu'
Durban - Lento yokuganwa nokugana ithathwa ngamanye amehlo kubantu abamnyama futhi nemigilingwane egilwayo ivama ukwehluka ngokwezizwe nokuyikho okungenza ngidideke ukuthi kanti lento yasukaphi futhi isho ukuthini.
Njengenkunzi kamabuyemendweni ephinde ibe umkhongi sengibone lukhulu kubantu abazibiza ngamaZulu nabathi baqhuba usiko lwesiZulu uma kukhulunywa ngokuganiselana.
Ibihlale ingihlupha njalo lento yokuthi amalobolo awafani kumaZulu, nobani usho okuthandwa nguyena.
Ngiye kokhonga ngapha emaXhoseni, hhayi liyabusa izwe ngapha. Kuzomele ngiye kofuna umakoti ngakhona.
Funda nalolu daba: 'Masigunyazwe nesithembu sabesifazane'
Laphaya isizwe sonke sisebenzisa imali yesicelo eyodwa hhayi inani elingafani. Bese kuthi amalobolo ayefana nse ngoba mekukhulunywa ngenkomo kukhulunywa ngenkomo hhayi imali, mekubizwa ihhashi kubizwa ihhashi hhayi imali.
Lamaqili angamaZulu afike akubize inkomo ka-11 okuyiyo ebiza ukwedlula zonke abanye bathi iwu-R9500 abanye bathi iwu-R14 000 nobani usho akuthandayo.
Bese zehlake njalo mhlambe ugcine uthole ukuthi eyokugcina ila ko-R7 000. Ulobole uqede imihlandla yezinkomo, kuyabe usungena kulomshikashika wezibizo engingawuqondi ukuthi yini umsebenzi wawo kahle-hle nokuthi kuba nani uma ungawuhambisanga.
Ngapha kwaXhosa ayikho yonke leyonto.
Uma amaZulu enobulungiswa yini kungalotsholwa ngezinkomo uqhube ‘ispani’ nje sika-11 wezinkomo ezivale ngamathole emumva njengoba phela zingalingani.
Kunalombhedo wokuchoma ngemali esingenayo.
Funda nalolu daba: 'Azikhali nzuzo kulabomatikuletsheni manje'
Kaningi sekucacile kimi ukuthi kushibhile ukuthenga izinkomo ezihamba ngezinyawo kunokulobola ngemali.
Uma ulandela lesiZulu sikamazisikele ugcina uhlukene nemali ebalelwa ko-R70 000 ungakashadiselwa ngokugcwele, kusanezindleko zomgcagco ngqo.
Ugcine usuchithe imali ela ko-R100 000, uzowakha ngani umuzi, uzomondla ngani lo mfazi, izingane zona uzozondla ngani? Uthi uphuma inxiwa ushikwa yisikweletu samalobolo, ushikwa yisikweletu sokondla lo mndeni wakho ugcine usunenhliziyo encane nje ekhaya, kuwe nenduku, kuqhume idivosi emva kwaloko.
Ngiyoganwa phesheya kweNciba ngikhathele amaZulu athanda imali thu-mashi!